နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်- အဲဒါက ဘာလဲ၊ လက္ခဏာများနှင့် အမျိုးအစားများ | Green Renewables များ
ဂျာမန် Portillo | 24/11/2021 18:00 | ပတ်ဝန်းကျင်
La နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓါတ်ရောင်ခြည် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ နေမှ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည့် အပူကို နားလည်ရန် အလွန်အရေးကြီးသော ကိန်းရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေတိုက်ခြင်း၊ တိမ်ထူထပ်ခြင်းနှင့် တစ်နှစ်တာရာသီအစရှိသော အကြောင်းရင်းများပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော နေရောင်ခြည် ပမာဏသည် ပိုများသည် သို့မဟုတ် နည်းပါးပါသည်။ ၎င်းသည် မြေပြင်နှင့် အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ မျက်နှာပြင်ကို အပူပေးနိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း ၎င်းသည် လေကိုအပူပေးရုံသာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အရင်းအမြစ်နှင့် လက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိသည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ နေရောင်ခြည်နဲ့ လေထုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေအကြောင်း သိထားသင့်တဲ့ အရာအားလုံးကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။
3 သက်ရှိများနှင့် ကမ္ဘာမြေကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
၎င်းသည် မတူညီသောကြိမ်နှုန်းများ၏ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းပုံစံဖြင့် နေမှရရှိသည့် စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည့် ကြိမ်နှုန်းများထဲတွင် အထင်ရှားဆုံးမှာ မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တို့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေမှရရှိသော နေရောင်ခြည်၏ ထက်ဝက်နီးပါးသည် ကြိမ်နှုန်း 0,4 μm နှင့် 0,7 μm ကြားရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဤဓာတ်ရောင်ခြည်အမျိုးအစားကို သိရှိနိုင်သည်။ လူ့မျက်လုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း မြင်နိုင်သောအလင်းတန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ကျန်တစ်ဝက်မှာ အဓိကအားဖြင့် အနီအောက်ရောင်ခြည် ရောင်စဉ် အပိုင်းဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်သော အပိုင်းသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အပိုင်းဖြစ်သည်။ နေမှရရှိသော ရောင်ခြည်ပမာဏကို တိုင်းတာရန်အတွက် pyranometer ဟုခေါ်သော ကိရိယာကို အသုံးပြုသည်။
နေရောင်ခြည်၏ အရင်းအမြစ်နှင့် လက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ အမျိုးအစားများ ကွဲပြားသည်။ မတူညီသော အမျိုးအစားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိကလက္ခဏာများကို သတ်မှတ်ခြင်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါမည်။
၎င်းသည် နေမှ တိုက်ရိုက်လာသော အရာဖြစ်ပြီး ဦးတည်ရာ ပြောင်းလဲမှု မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။. လေပြင်းဒဏ်ကို သင်မြင်နိုင်သော်လည်း သက်ရောက်မှုမှာ သိသာထင်ရှားခြင်းမရှိပေ။ လေထန်တဲ့နေ့တွေမှာ အပူဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ လေပြင်းတိုက်တဲ့အခါ မျက်နှာပြင်မှာ အပူဓာတ်က သိပ်ပြီး မပြင်းထန်ပါဘူး။ ဤရောင်ခြည်မျိုး၏ အဓိကလက္ခဏာမှာ ၎င်းကို ကြားဖြတ်ဟန့်တားသော အလင်းအမှောင်ရှိသော အရာဝတ္ထုများမှ အလင်းတန်းများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
၎င်းသည် နေမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ရောက်ရှိလာပြီး အလင်းပြန်မှု သို့မဟုတ် တိမ်တိုက်မှ စုပ်ယူသည့် ရောင်ခြည်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ အရပ်ရပ်သို့ ပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို diffuse reflections ဟုခေါ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် တိမ်တိုက်များမှသာမက လေထုထဲတွင် လွင့်နေသော အမှုန်အမွှားများထံမှ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့် စုပ်ယူမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤအမှုန်အမွှားများကို လေထုဖုန်မှုန့်ဟုခေါ်ပြီး နေရောင်ခြည်ကို ဖြန့်ကျက်နိုင်သည်။ ရယ် တောင်များ၊ သစ်ပင်များ၊ အဆောက်အဦများနှင့် မြေပြင်ကဲ့သို့သော အရာဝတ္ထုများမှ လှည့်ပတ်သွားသောကြောင့် ၎င်းကို diffuse reflection ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် မူတည်.
ဤဓါတ်ရောင်ခြည်အမျိုးအစား၏ အဓိကလက္ခဏာမှာ ထည့်သွင်းထားသော အလင်းမှုန်သော အရာဝတ္တုများပေါ်တွင် အရိပ်များမပြတတ်ပါ။ အလျားလိုက် မျက်နှာပြင်များသည် ပြန့်ကျဲနေသော ရောင်ခြည်များ အများအပြား ထွက်ပေါ်လာသော မျက်နှာပြင်များ ဖြစ်သည်။ ထိတွေ့မှု မရှိသလောက် ဖြစ်သောကြောင့် ဒေါင်လိုက် မျက်နှာပြင်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် မြေမျက်နှာပြင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်သော အမျိုးအစားဖြစ်သည်။. နေရောင်ခြည်မှ ကျွန်ုပ်တို့သို့ရောက်ရှိသော ရောင်ခြည်အားလုံးကို မျက်နှာပြင်မှ စုပ်ယူခြင်းမရှိသော်လည်း အချို့မှာ ကွဲလွဲသွားပါသည်။ မျက်နှာပြင်မှထွက်သော ရောင်ခြည်ပမာဏကို albedo ဟုခေါ်သည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ဝင်ရိုးစွန်းရေခဲဖုံးများ အရည်ပျော်ခြင်းကြောင့် ကုန်းတွင်းရှိ albedo သည် ကြီးမားစွာ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
အလျားလိုက် မျက်နှာပြင်များသည် ကမ္ဘာမြေ၏ မည်သည့်မျက်နှာပြင်ကိုမျှ မမြင်နိုင်သောကြောင့် ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်ရောင်ခြည်ကို ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ နေရောင်ခြည်ရဲ့ အခြေအနေဟာ အတော်လေး ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ ဤကိစ္စတွင်၊ ဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင်သည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပမာဏအများဆုံးရရှိသည်။
၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ရောင်ခြည်စုစုပေါင်း ပမာဏဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ယခင် ရောင်ခြည်သုံးမျိုး၏ ပေါင်းစုဖြစ်သည်။ နေသာတဲ့နေ့ရဲ့ ဥပမာကို ကြည့်ရအောင်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျံ့နှံ့နေသော ရောင်ခြည်ထက် သာလွန်သော တိုက်ရိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိမ်ထူသောနေ့များတွင် တိုက်ရိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်မပြခြင်း၊ ဒါပေမယ့် အဖြစ်အပျက်အားလုံးက ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေ ပြန့်ကျဲနေတယ်။
သက်ရှိများနှင့် ကမ္ဘာမြေကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည် နေရောင်ခြည် အများအပြားကို လက်ခံရရှိပါက၊ ယခုကဲ့သို့ သက်ရှိများ ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပေ။ ကမ္ဘာမြေ၏ စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာသည် သုညဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကမ္ဘာမြေမှ ရရှိသော နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည် ပမာဏသည် ပြင်ပ အာကာသထဲသို့ ထုတ်လွှတ်သော နေရောင်ခြည် ပမာဏနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချို့သော nuances များကိုထည့်ရပါမည်။ သို့ဆိုလျှင် မြေကြီးပေါ်တွင် အပူချိန် -88 ဒီဂရီ ရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤရောင်ခြည်ကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး အပူချိန်အဆင့် သက်တောင့်သက်သာနှင့် နေထိုင်နိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းသည် အသက်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အရာတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်သည် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကျရောက်လာသော နေရောင်ခြည်ကို အမြောက်အမြားကျန်ရှိနေစေရန် ကူညီပေးသည့် အင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်နိုင်သော အခြေအနေများ ရှိနိုင်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိသောအခါ၊ တစ်ဝက်နီးပါးသည် လေထုထဲသို့ ပြန်သွားကာ ပြင်ပအာကာသထဲသို့ ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ မျက်နှာပြင်မှ ပြန်ထွက်လာသော ရောင်ခြည်အချို့ကို လေထုတိမ်တိုက်များနှင့် ဖုန်မှုန့်များက စုပ်ယူကာ ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ သို့သော်လည်း ဓါတ်ရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုပမာဏသည် တည်ငြိမ်သောအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် မလုံလောက်ပါ။
ဤသည်မှာ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်မှ ဖြာထွက်သော အပူ၏အစိတ်အပိုင်းကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး ကမ္ဘာမြေသို့ရောက်ရှိသည့် ရောင်ခြည်များကို လေထုထဲသို့ ပြန်ပို့ပေးနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့မျိုးစုံဖြစ်သည်။ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ ပါဝင်သည်- ရေခိုးရေငွေ့၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO2)၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်၊ ဆာလဖာအောက်ဆိုဒ်၊ မီသိန်းစသည်တို့ လူသားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် လူသားများအပေါ် နေရောင်ခြည်၏ သက်ရောက်မှုသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။
နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည် အမျိုးအစားအားလုံး၏ ပေါင်းစုသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် သက်ရှိများကို ခွင့်ပြုပေးသော ဓာတ်ရောင်ခြည်. ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ တိုးလာမှု ပြဿနာကို သက်သာရာရစေပြီး အခြေအနေကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် မျှော်လင့်ကြပါစို့။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်နှင့် ဘဝအတွက် ၎င်း၏ အရေးကြီးပုံကို သင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » နေရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်